December 2018 – Myanmar Photo News
မြန်မာကိုရောက်ရှိလာတော့မယ့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စာအုပ်ဈေးပွဲတော် Big Bad Wolf Books Sale အသစ်စက်စက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စာအုပ်ပေါင်း (၁)သန်းကျော်ကို (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းကနေ (၉၀) ရာခိုင်နှုန်း အထူးလျော့ဈေးတွေနဲ့ စိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူရွေးချယ်လို့ရတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ရွေ့..နိပ်ဟ ဆိုသလိုပေါ့။ အချိန်ကတော့ လာမယ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်ကနေ ၂၈ ရက်အထိ ၁၁ ရက်လုံး လုပ်မှာဆိုတော့ အေးအေးဆေးဆေး သေချာရွေးလို့ […]
December 25, 2018 ccp Festival, Local, News
Art Gallery Show with recycle products
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြင့် လက်မှုအနုပညာပွဲတော် ဖွင့်လှစ်
December 25, 2018 December 25, 2018 ccp Local, News
44th Ya Khine National Day Ceremony
(၄၄) နှစ်မြောက် ရခိုင်ပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲတော်
ွGlazed earthen jar and Bagan umbrella festival
စဉ့်အိုး စဉ့်ထည် နှင့် ပုဂံထီးပွဲတော် ဒီပွဲတော် ထဲမှာ 🔺 အစားအသောက်ဆိုင်ခန်း ၂၀ ကျော် ရှိနေမယ် 🔺 ရုပ်သေးရုပ်နှင့် ရိုးရာ လက်မူ့ ပညာတွေ ရှိမယ် 🔺 အိုးပုတ် / အရုပ်အစုံလင်နှင့်အတူ ဒီပွဲတော်ရဲ့ အဓိက ဖြစ်တဲ့ ” ပုဂံထီး နှင့် စဉ့်အိုးစဉ့်ထည် ” တွေကိုတော့ အမျိုးအမည် ၂၀၀ ကျော်ထိ […]
December 22, 2018 December 22, 2018 ccp Festival, Local
Christmas party and Nate Ban Market held in Yangon Metal hospital on 19 Dec
စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံ ကြီး(ရန်ကုန်)ခရစ်စမတ်နှစ်သစ်ကူးပျော်ပွဲရွှင်ပွဲနှင့်နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော်အခမ်းအနား စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံ ကြီး(ရန်ကုန်)ခရစ်စမတ်နှစ်သစ်ကူးပျော်ပွဲရွှင်ပွဲနှင့်နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော်အခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာ၁၉ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကြီးရှိဝေဒနာရှင်များနှင့်ဝန်ထမ်းများအတွက်နိူင်ငံကျော်အဆိုတော်များကမေတ္တာ ဖြင့်လာရောက်ဖျော်ဖြေပေးကြပါသည်။ ဓာတ်ပုံ ရွှေအင်းသားခင်မောင်ဝင်း Source : The New Sky Media
Bo Aung Kyaw street of Yangon in Bo Ta Htaung township received heritage blue label
ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မှ ရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်တထောင် မြို့နယ်ရှိဗိုလ်အောင် ကျော်လမ်းအားအပြာရောင် ကမ္ဗည်းပြား တပ်ဆင်ခြင်းအခမ်းအနား ရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မှ ရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်တထောင် မြို့နယ်ရှိဗိုလ်အောင် ကျော်လမ်းအားအပြာရောင် ကမ္ဗည်းပြား တပ်ဆင်ခြင်းအခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုအောင်ကျော်သည်ကိုလိုနီကျွန်ပညာရေးစနစ်ကိုမလိုလား၍သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြရင်းအင်္ဂလိပ်စစ်ပုလိပ်တို့၏လက်ချက်ဖြင့်ကျဆုံးသွားသောနေရာကုိ အမှတ်ရစေခြင်းဖြင့်ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းဟုအမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံ ရွှေအင်းသားခင်မောင်ဝင်း Source : The New Sky Media
December 22, 2018 December 22, 2018 ccp Local, News
Army Medicine Course (19) to celebrate graduating cadets military ceremony
တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၉) သင်တန်းဆင်း ဂုဏ်ပြုစစ်ရေးပြ အခမ်းအနား ကျင်းပ Source : The New Sky Media
December 20, 2018 December 20, 2018 ccp Local, News
Traditional lighting festival
ရိုးရာ မီးပုံ ပွဲတော် ပွဲတော်ရက်က – 31 . 12. 2018 ကနေ 2.1.2019 အထိ 💥ပွဲတော်ကျင်းပချိန်က – 1 Pm to 12 Pm ထိ 💥Show ပွဲအချိန်က –6Pm to 12 Pm ပါ 💥နေရာက […]
December 20, 2018 December 20, 2018 ccp Festival, Local
Countdown Festival “ ရန်ကုန်မှာ မကြာခင် ကျင်းပတော့မည် ဖြစ်တဲ့ ❤️ Countdown Festival 😍” ပွဲတော်အကြောင်း ပွဲတော်ရက်က Dec. 29 , 30 , 31 မို့New Years မှာ ခရီးသွားဖို့အစီစဉ်မရှိဘူးဆိုရင် သွားလိုက်ကြပါလား.. န်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်း အဆိုတော်တွေဖြစ်တဲ့ […]